ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ် | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်	ကံမခိုင် သံတိုင်အိမ် ဆောက်သော်လည်း . .Published July 14, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	မြန်မာစကားပုံ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ “ကံမခိုင် သံတိုင်အိမ်ဆောက်သော်လည်း၊ ကံမှောက်လျှင် လဲ” တဲ့ ။ ကြားဖူး ကြမှာပါ။ အဓိပ္ပါယ်က “ကံတရားက ခိုင်ခန့်မှု မရှိရင် သံတိုင်တွေနဲ့ အိမ်ဆောက်ပေမယ့် ကံမှောက်မှားသွားရင်တော့ လဲပြိုရတော့ တာပါဘဲ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။
ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ ကျင်းပ ပြီးစီးသွားတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နဲ့ ပက်သတ်ပြီး ကံတရားရဲ့ ဆန်းကြယ်လှပုံ ကို အံ့သြမိရာကနေ – ငွေကြေး ဥစ္စာဆိုတာလည်း ဉာဏ်ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း၊ ၀ီရိယ ဘယ် လောက် စိုက်စိုက် ၊ ကံမကောင်းရင် လွဲတတ်ပုံ လေးကို သံဝေဂ ရမိလို့ ကောက်ရေး လိုက်တာပါ။
ကမ္ဘာ့ဖလား ချန်ပီယံ ဆုကြီးကို “စပိန်” နိုင်ငံ က သိမ်းပိုက်လိုက်တာကိုတော့ အားလုံး သိကြပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် “စပိန်” ဘက်က လုပ်လိုက်တာ “ခွက်ခွက်လန်” သွားတယ် . . . “ဟော်လန်” သမားတွေကတော့ “အိတ်ဖောင်း” သွားတယ် . . စတဲ့ အသံတွေ ကြားတော့ တစ်ချို့က (နားမလည်ကြသူတွေက) မေးလာကြတယ်ခင်ဗျ။
“စပိန်” က နိုင်ရဲ့သားနဲ့ သူ့ဘက်က “လုပ်” တဲ့လူတွေ ဘာလို့ ရှုံးတာလဲ . . တဲ့။ သြော် – ဘောလုံးပွဲကိုသာ ကြည့်တတ်ပြီး အနိုင်/အရှုံး နားမလည်ကြတာများ ခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် နားမလည် ကြသူများအတွက် နဲနဲ ရှင်းပြချင်လို့ပါ။ ဗဟုသုတပေါ့။ နားလည်ပြီးသား သူတွေ အတွက် ဆရာလုပ် ပြတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
Posted in ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ် | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် တန်ခိုးPublished November 26, 2009 | By dr.tin bo bo	.
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,460)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,955)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,526)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,303)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,380)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,537)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,569)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,933)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,279)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,262)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,086)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,046)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,812)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,749)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,297)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,111)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,831)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,476)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,136)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,824)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,680)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,541)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,473)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,253)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,220)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,890)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,669)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,472)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,010)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !